eTurboNews Mutori wenhau wekutaura paMusangano wakakosha weInternational Eco Tourism
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » eTurboNews Mutori wenhau wekutaura paMusangano wakakosha weInternational Eco Tourism
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • dzidzo • Hospitality Industry • misangano • nhau • Sri Lanka Kuputsa Nhau • Sustainability News • Taiwan Kupwanya Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Srilal Miththapala, an eTurboNews mutori wenhau kubva kuSri Lanka anga ari pamberi mukukurudzira budiriro yekushanya uye eco-tourism muSri Lanka akokwa kuti ape imwe yehurukuro dzakakosha paMusangano wepasi rose weEco Tourism muTaiwan, wakarongwa muna Mbudzi 19 na20, 2021.
Musangano weInternational Eco Tourism uri kuitwa pamhepo pasi pesangano reTaiwan Ecotourism Association.
Srilal achange achipa hurukuro yakakosha pazuva rekutanga chiitiko ichi chakakosha chemazuva maviri.
Dingindira rechikamu chekutanga ndere "Mhinduro kune Kuvandudza Trend yeEcotourism pasi peCOVID-19."
Musangano uyu, uchaitwa zvakangoita/pamhepo, uri kurongwa neve Taiwan Ecotourism Association (TEA). Pachava nezvikamu zvitatu zvakapararira mumazuva maviri, uye vakurukuri vakawanda vakatanhamara vachange vachipa.
Muchikamu 1 pasi pomusoro unoti “Mhinduro Kuri Kukudziridzika Maitiro eEcotourism pasi peCCIDID-19, ”Srilal achange achiburitsa chinyorwa chakanzi "Kudzivirira Zvipenyu zvakasiyana-siyana - Post COVID Tourism?"
Srilal aive CEO weSerendib Leisure kweanopfuura makore gumi, uye akazotungamira chirongwa cheCeylon Chamber/EU, CHINJA ASIA Greening Sri Lanka mahotera zvakabudirira kwemakore mana. Iye zvino ave pamudyandigere uye anoita basa rekupa mazano neADB, GiZ, uye MDF (chirongwa cheAustralia chenyika dzakawanda). Anoshanda pamabhodhi eLaugfs Leisure uye Asia Eco Tourism Network.